‘हनी ट्र्याप’मा पारेर पैसा असुल्ने तीन महिला फन्दामा
September 19, 2021 N88LeaveaComment on ‘हनी ट्र्याप’मा पारेर पैसा असुल्ने तीन महिला फन्दामा
दाङ । दाङ प्रहरीले आपराधिक लाभ (एक्सटर्सन) कसुरमा तीन जना महिलालाई पक्राउ गरेर आइतबार सार्वजनिक गरेको छ । कानुनी परामर्शको नाममा होटेलमा बोलाई बियर र चिया खाएकै भरमा जबर्जस्ती करणीको आरोप लगाएर ती महिलाहरूले एक पुरुषसँग बार्गेनिङ गरेको पाइएपछि प्रहरीले पक्राउ गरी अनुसन्धान थालेको जानकारी िदएको छ । ५० लाख रुपैयाँबाट बार्गेनिङ गरेर १८ लाख रुपैयाँमा […]
से’क्स स्क्यान्डल सेलाउन नपाउँदै मन्त्री शाहीको गाउँपालिका उपाध्यक्षको टिकटकले फेरि चर्चा
September 19, 2021 N88LeaveaComment on से’क्स स्क्यान्डल सेलाउन नपाउँदै मन्त्री शाहीको गाउँपालिका उपाध्यक्षको टिकटकले फेरि चर्चा
काठमाडौँ । कर्णालीका कृषि मन्त्री कुर्मराज शाही फेरि विवादमा मुछिएका छन् । आफ्नै स्वकीय सचिवकी श्रीमतीसँगको से’क्स स्क्यान्डलमा मुछिएका उनको अहिले गाउँपालिकाकी उपाध्यक्षको टिकटकमा आपलोड भएको एउटा भिडियो चर्चामा रहेका छन् । शुभकालिका गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष पम्फा शाहीको टिकटक अकाउन्टबाट आपलोड भएको एउटा भिडियो अहिले चर्चामा रहेको छ । भिडियोमा कुर्मराज शाहीको तस्बिर प्रयोग गरिएको थियो, […]
September 19, 2021 N88LeaveaComment on ओमानमाथि नेपालको शानदार जित
काठमाडौं । आईसीसी विश्वकप क्रिकेट लिग–२ अन्तर्गतको त्रिकोणात्मक एकदिवसीय अन्तराष्ट्रिय सिरिजको अन्तिम खेलमा नेपालले ओमानलाई पराजित गरेको छ । अल अमिरात क्रिकेट मैदानमा आइतबार भएको खेलमा नेपालले घरेलु टोली ओमानलाई ७ विकेटले पराजित गरेको हो । ओमानले दिएको १ सय २२ रनको लक्ष्य नेपालले १८ ओभर २ बलमा ३ विकेट गुमाएर पूरा गर्यो । नेपालको […]
September 19, 2021 N88LeaveaComment on सुवास नेम्वाङलाई कसले दियो धम्की ?
काठमाडौंँ । नेकपा एमालेका स्थायी कमिटी सदस्य तथा तत्कालीन संविधान सभाका अध्यक्ष सुवास नेम्वाङले संविधान जारी गर्ने बेला संविधान जारी गर्न नदिन धम्की आएको बताएका छन् । संविधान दिवसको अवसरमा आइतबार एमालेले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष नेम्वाङले संविधान ढिलो जारी गर्न धम्की दिएको बताए । उनले लोभ, लालच देखाएर संविधान जारी नगर्न धम्की दिएको […]
September 19, 2021 N88LeaveaComment on एमालेमा अध्यक्षसहित सबै प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने, ७० वर्ष उमेर हदको प्रस्ताव
काठमाडौँ । पार्टीभित्र असन्तुष्टि बढेपछि नेकपा एमालेले अध्यक्षसहितका सबै पदाधिकारीहरु प्रत्यक्ष रुपमा निर्वाचित हुने व्यवस्थाको प्रस्ताव गरेको छ । आइतबारबाट सुरु भएको स्थायी कमिटी बैठकमा संगठन विभागले प्रस्ताव गरेको विधानमा सबै पदाधिकारी निर्वाचित हुने व्यवस्था गरिएको हो । यसअघि अध्यक्ष मात्रै महाधिवेशनबाट निर्वाचित हुने र बाँकी पदाधिकारीहरु केन्द्रीय सदस्यहरुबाट अध्यक्षले मनोनित गर्ने प्रस्ताव गरिएको थियो […]
रामकुमारी झाक्रीले (एस) पार्टीको कार्यक्रममै यस्तो हर्क’त गरेपछि… भिडियो बन्यो भाइरल (भिडियोसहित)
September 19, 2021 September 19, 2021 N88LeaveaComment on रामकुमारी झाक्रीले (एस) पार्टीको कार्यक्रममै यस्तो हर्क’त गरेपछि… भिडियो बन्यो भाइरल (भिडियोसहित)
काठमाडाैं । नेकपा एमाले विभाजन गराएर नेकपा एस बनाउँन दिलो ज्यानले माधव नेपाललाई साथ दिएर अहिले पनि देश व्यापी रुपमा चर्को भाषण गर्दै हिडेकी रामकुमारी झाँक्री सार्वजनिक मंचमा दिउँसै घुरेर निदाएकी छिन् । पार्टी फु”टाएर देशव्यापी दौडाहमा निस्किएकी झाँक्री आज सिन्धुली पुगेर दिउँसै मंचमा निदाएकी हुन् । नेकपा एसले सिन्धुलीमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा प्रमुख बक्ताको […]
यही साता सरकारमा जाँदैछौँ : माधव नेपाल
September 19, 2021 N88LeaveaComment on यही साता सरकारमा जाँदैछौँ : माधव नेपाल
पोखरा । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले यही हप्तामा पार्टी सरकारमा सहभागी हुने बताएका छन् । संविधान दिवसका अवसरमा पार्टीको कास्की जिल्ला समितिले आइतबार पोखरामा आयोजना गरेको गणतन्त्र एवं संविधान रक्षाका निम्ति पार्टीको भूमिका विषयक विचार गोष्ठी तथा कार्यकर्ता भेलामा अध्यक्ष नेपालले पार्टीका तर्फबाट केन्द्रीय सरकारमा मन्त्री पठाइने जानकारी दिएका हुन् । […]
भरतमणीलाई बधाई दिँदै योगेशले भने : नेपाली कमेडीमा सशक्त पुस्ताको उदय
September 19, 2021 N88LeaveaComment on भरतमणीलाई बधाई दिँदै योगेशले भने : नेपाली कमेडीमा सशक्त पुस्ताको उदय
काठमाडौं । दोस्रो कमेडी च्याम्पियन बनेका आफ्नो गृहजिल्ला ताप्लेजुङका भरतमणी पौडेललाई एमाले नेता योगेश भट्टराईले बधाई दिएका छन् । बधाई दिँदै उनले भरतमणीको जितले नेपाली हाँस्य कलाकारितामा नयाँ र सशक्त पुस्ताको उदय भएको बताएका छन् । फस्टरनर अप विक्की अग्रवाल र सेकेन्ड रनरअप सन्तोष थापालाई पनि बधाई दिएका छन् । नेता भट्टराई सुरुदेखि नै भरतमणीलाई […]
माधव र प्रचण्डको महत्व कवाडीको मूल्य बराबार – महेश बस्नेत
September 19, 2021 N88LeaveaComment on माधव र प्रचण्डको महत्व कवाडीको मूल्य बराबार – महेश बस्नेत
काठमाडौं। एमाले नेता एवं पूर्वमन्त्री महेश बस्नेतले एमालेको विभाजन हातीलाई भुसुनाले टोके जस्तो भएको बताउनुभएको छ । नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनको राष्ट्रिय भेलालाई आज सम्बोधन गर्दै नेता बस्नेतले एमाले हाती जत्रो पार्टी भएको र माधव नेपालहरु भुसुना जस्तो भएको बताउनुभएको हो । उहाँले विभाजनले एमालेलाई कुनै असर नगरेको पनि बताउनुभयो । प्रचण्ड अब सेनाविहनि सेनापती […]
अर्थमन्त्री जनार्दन ठूलै भ्रष्टाचार काण्डमा मुछिएको खुलासा ! पोल खुलेपछि खैलाबैला
September 19, 2021 N88LeaveaComment on अर्थमन्त्री जनार्दन ठूलै भ्रष्टाचार काण्डमा मुछिएको खुलासा ! पोल खुलेपछि खैलाबैला
काठमाडाैं । आशा गरिएका र केही आश लाग्दो काम गर्ने संकेत देखाएका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा भ्रष्टाचारमा मुछिएका छन् । उनलाई नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भ्रष्टाचारमा मुछेका हुन् । अर्थमन्त्री शर्माले प्रतिस्थापन विद्येकमार्फत अर्बौंको सेटिङ मिलाएर भ्रष्टाचार गर्न लागेको आरोप ओलीले लगाए । ‘अर्बौको खेल भइसक्यो, सेटिङ होइन भन्ने ठाउँ छैन, यो […]